Dhinacyada colaadda Yemen oo isku mari la’ mustaqbalka dekedda Xudayda – Radio Daljir
Dhinacyada colaadda Yemen oo isku mari la’ mustaqbalka dekedda Xudayda
Diseenbar 11, 2018 6:13 b 0
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa isku mari la’ mustaqbalka magaalada dekedda ah ee Xudayda, iyadoo shir ay soo qabanqaabisay QM uu uu ka socdo magaalada Rimbo ee waqooyiga kaga aadan caasimadda wadanka Sweden ee Stockholm maalintii shanaad.
Dowladda Yemen ayaa ku adkaysanaya inay iyada lagu soo wareejiyo, loogana dambeeyo xaalka magaalada Xudayda ee dekedda leh, taasi oo ay kooxda Xuutiyiinta wakiilada u matalaya wadahadalka ay diideen.
Isagoo saxaafadda kula hadlayay wadanka Sweden Ali Ashal oo ah sarkaal katirsan dowladda Yemen, xubina ka ah wafdiga ay dowladda Yemen ay dirsatay ayaa waxaa uu sheegay inay doonayaan in maamulka dekedda Xudayda la hoos geeyo wasaaradda dekedaha ee Yemen.
“Booliska magaalada waa in la hoos geeyaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Yemen oo ay kormeertaa” ayuu yiri Ashall.
“Waxaanu doonaynaa in dib loo loogu celiyo dowladda magaaada Xudayda sida ay ahayd kahor qabsashadii Xuutiyiinta ee magaalada kahor sanadkii 2014kii” ayuu sheegay Ashall.
Xuutiyiinta Yemen ayaa dhankooda sheegay kaliya in dekedda ay ku wareejinayaan QM haddii isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta ay joojiyeen duqaymaha ay qaadaan.
Qodobo ay soo saartay QM oo heshiiska taabanaya ayaa tilmaamaya Xuutiga inay ka baxaan magaalada Xudayda ee dekedda leh iyo dekedaha kalle Saliif iyo Ras Isa, isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta ay joojiyaan duqaymaha ay qaadayaam, waxaana kalle oo QM ay sheegtay in guddi kormeer ah ay u diri doonto magaalada Xudayda iyo dekedaha mucaaradku uu hayo si xaaladda deegaamadaasi uu ula socdo.
Qodobada QM ayaa lagu sheegay in dakhliga dekedda kasoo xaroodo la dhigo bankiga dhexe ee Yemen oo lagu bixiyo mushaarka shaqalaaha rayidka ee dowladda Yemen oo wax mushaar ah qaadan ilaa muddo laba sano ah, kuwaasi oo isugu jira macalimiin iyo dhaqaatiir.
Colaadda dalka Yemen ayaa waxaa ku geeriyooday 56, kun oo qof.
Madaxwaynaha Faransiiska oo qaaday talaabo uu ku joojinayo rabshadaha dalkiisa
Faysal Cali Waraabe ” Waxaan ka shaqaynayaa in m/wayne Farmaajo xilka laga qaado” (dhegayso)